कुलमानलाई फेरि जिम्मेवारी दिन प्रचण्डको अडान, ओलीलाई दिए चेतावनी – Daily NpNews
हिजो नेपाल आएका रेल भारत फर्किए, फेरि कहिले आउँछन् टुङ्गो छैन !
यसरि फहराइयो नेपालको झण्डा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवन दुबईको बुर्ज खालिफामा (हेर्नुहोस भिडियो)
यसकारण अचानक र*णभुमि बन्यो सर्लाही, भोली बिहान ८ बजेसम्म क*र्फ्यु लगाइयो
डब्ल्यूएचओकी प्रमुख वैज्ञानिकले कोरोना बिरुद्धको खोप बारे गरिन् यस्तो खुलासा
वि’चित्र संसार: ‘मलाई क्या’न्स’र भयो’ भनेर श्रीमतीलाई ढाँटेर विदेशमा ४ वर्ष देखि अर्कै महि’लासंग म’स्ती (भिडियो हेर्नुस्)
महिलाका यी बानी, जसमा भूतुक्कै हुन्छन् पुरुष
किन टाँगिन्छ ढोकामा कागती र खुर्सानी ? कहिले र कसरी टाँग्ने ?
DSP सहित दर्जनौ प्र-हरीले रमिलामाथी यस्तो अ,त्या,चार …रा,तारात आइन मि,डियामा, हेर्नुस्
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कडा चेताबनी – पुलिसलाई लात हान्छु, नेताको घरमा आगो बाल्छौ भन्दै जंगीईन युवती, हेर्नुस कडा आक्रोश
जनकपुरमा आयो रेल, विराटनगरमा कहिले आउला ?
मुख्य पृष्ठ /News/कुलमानलाई फेरि जिम्मेवारी दिन प्रचण्डको अडान, ओलीलाई दिए चेतावनी
कुलमानलाई फेरि जिम्मेवारी दिन प्रचण्डको अडान, ओलीलाई दिए चेतावनी
1,618 Less thanaminute
काठमाडौं । ४ वर्ष कार्यकाल सकेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक एमडी पदबाट विदा हुन लागेका कुलमान घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अडान लिएका छन्।
कार्यकाल सकिनु अगाडिदेखि नै प्रचण्ड कुलमानको पक्षमा उभिदै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन भने सकारात्मक छैनन्। उनीहरु सकभर कुलमानलाई पन्छाउन चाहन्छन्। यस्तो बेला हिजाे कुलमानको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रचण्ड आइतवार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलमानलाई नै दोहोर्या उन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कुलमानको पक्षमा सकारात्मक नदेखिएका ओलीलाई प्रचण्डले जनमतको कदर गर्न भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। बरु कुलमानलाई कुनै ठाउँमा सच्याउनुपर्ने भए त्यो गर्न सकिने तर जनमत विपरीत नजान प्रचण्डले सरकार प्रमुख ओलीलाई चेतावनि दिएका हुन्। भेटमाम प्रचण्डले स्थायी कमिटी पारित गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सार्वजनिक हित र सरोकार र नियुक्तिका विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने बुँदा पनि स्मरण गराएका थिए।
प्रचण्डको अडान पछि प्रधानमन्त्री ओली केही लचिलो देखिएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्छन्। आज बैठक बसेन भने अर्को बैठकमा निर्णय हुनसक्छ। उर्जा मन्त्रालयले पनि एमडी नियुक्तिका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। उर्जामन्त्री पुनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले विद्युत प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए उर्जा मन्त्रालयले कुलमानकै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
बाइक जोगाउन खोज्दा विवाहको ६ महिनामै सिन्दुर पुछियो
भोलि बिदा दिने निर्णय
अचम्मको कोरोना रिपोर्ट: जिउँदै छँदा पोजेटिभ, मरेपछि नेगेटिभ !
‘विवाह गर्छु’ भनेर प्रेमीले बोलाएर गएकी यीनलाई ५ दिन सम्म यस्तो हर्कत गरेपछि (भिडियो)
उपत्यकामा थपिए ४३१ संक्रमित, ५ जनाको मृत्यु
36 mins अघि
49 mins अघि